🥇 ▷ Sida loo kobciyo Jiilka 4 Pokémon ee Pokemon Go ✅
Sida loo kobciyo Jiilka 4 Pokémon ee Pokemon Go
Waxaan kuu sheegeynaa sida loo baddalo Pokémon jiilka 4 ee Pokemon Go. In kasta oo taariikhda loo heli karo abuuryada jiilka afraad ee Pokemon Go aan wali si rasmi ah loo shaacin, bulshada ayaa durbadiiba duulimaad ka dambaysa dhegteeda oo xannibaysa maalmaha ugu dambeeya in xayawaanadan ay soo muuqan doonaan inta lagu jiro cusbooneysiinta soo socota.
Taasi waa sababta ay ciyaartoydu u yimaadaan oo ay isugu diyaarinayaan inay kaydisaan nacnaca saxda ah ka hor inta jiritaanka xayawaanadan aysan bilaaban, si haddii ay mar hore u cusbooneysiiyaan pokedexkooda sida ugu dhaqsaha badan.
Sidaad xasuusato usbuucii la soo dhaafay, Pokémon GO wuxuu soo saaray muuqaal xafladeed sanadguuradiisii ​​labaad oo ay ka soo muuqdeen xayawaannada jiilka afraad. Farxad badan ayaa soo saartay bulshada oo hadda ciyaartoydu waxay horeyba ugu qanciyeen in qarnigan afaraad uu ku soo dhowaanayo inuu ciyaaro.
Marka laga soo bilaabo bulshada waxay durba bilaabeen inay shaqeeyaan oo waxay abuureen infographic xiiso leh halkaas oo aad ka arki karto heerarka isbeddelka iyo imisa shumac ayaa looga baahan yahay mid kasta oo ka mid ah xayawaannada jiilka afraad ee Pokémon GO.
Sida iska cad kharashaadyada isbeddelada ah ma aysan xaqiijin kooxda horumarku waana saadaalin u gaar ah bulshada. Taasi waa haddii saadaashaani ku saleysan yihiin qaabkii hore ee nacnaca ee looga baahan yahay jiilalka kale.